Olee otú mmekọrịta iPhone na Mac-enweghị adịkwa Ihe ọ bụla
Olee otú mmekọrịta iPhone na Mac
M dị nnọọ zụtara a ọhụrụ MacBook Pro. Olee otú m mmekọrịta m iPhone ndị ọhụrụ Mac? Mgbe m na-eme ya dị ka ihe m na-emekarị na-eme, ọ na-agwa m ọ na-aga ihichapu m iPhone. Biko nyere m aka.
Ọ na-eme mgbe niile mgbe ọrụ zụtara a ọhụrụ Mac na-agbalị ka mmekọrịta iPhone ọhụrụ Mac, a ozi site na iTunes Pop elu, si ya ga-akwụsị ihe iPhone. Nke a bụ otú iTunes arụ ọrụ. Ọ ga-akwụsị data na gị iPhone na ha jupụta ya na ọhụrụ data gị iPhone. Na nke a, ị kwesịrị ị na-eso 2 akụkụ n'okpuru ka mmekọrịta gị iPhone na Mac. Ọ bụrụ na ị ga-esi ọhụrụ iPhone na-agbalị ka mmekọrịta gị na Mac, dị nnọọ Ikwu Part 3.
Part 1. Paghaa iTunes Library si Old na kọmputa na-New Mac
Part 2. Paghaa Music / Videos / Foto si iPhone ka New Mac
Part 3. mmekọrịta iPhone na Mac
Ọ bụrụ na ị nwere ika-ọhụrụ Mac, ka mmekọrịta gị iPhone ọhụrụ Mac enweghị adịkwa ihe ọ bula, ị kwesịrị ị mbụ ịkpali iTunes Library si ochie kọmputa ọhụrụ gị Mac. Lee ndị nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1. inokota iTunes Media File on Windows PC
Mepee iTunes Library na gị okenye na kọmputa. Ọ bụrụ na ị na-eji a Windows PC, pịa iTunes Dezie menu ma họrọ Mmasị. Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac, pịa iTunes menu ma họrọ Mmasị. Wee pịa Advanced. Si ebe a, lelee na nhọrọ: Nọgidenụ na iTunes Media nchekwa haziri na Copy faịlụ ka iTunes Media nchekwa mgbe na-agbakwụnye na ọbá akwụkwọ na pịa OK. Wee pịa iTunes File menu> Library> Hazie Library. Na Hazie Library mkparịta ụka igbe, ego inokota faịlụ na pịa OK.
Nzọụkwụ 2. Copy iTunes Library Media nchekwa Mac
Ọ ga-ewe gị nnọọ ogologo Tim inokota gị iTunes Library bụrụ na i nwere ọtụtụ narị songs na n'ọbá akwụkwọ. Mgbe ahụ ị ga-idetuo Media nchekwa na mpụga ike mbanye. Ebe Media nchekwa bụ? Cheta iTunes Mmasị window ke nzọụkwụ 1. Ị pụrụ ịhụ Media nchekwa ọnọdụ site ebe a. Jide n'aka na mpụga ike mbanye nwere ezu ohere maka Media nchekwa. Na mgbe ahụ ẹkedori iTunes na ọhụrụ gị Mac, pịa Dezie menu ma họrọ Mmasị. Pịa Advanced taabụ ịhụ ebe iTunes Library Media nchekwa gị Mac bụ. Mgbe maara ya, idetuo na mado ochie iTunes Library Media nchekwa gị mpụga ike mbanye ebe a.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị na kwukwara songs ma ọ bụ ndị ọzọ na faịlụ ka iTunes na gị Mac, ị kwesịrị ị na jikota abụọ media nchekwa maka iTunes. Ma, i nwere ike gharazie faịlụ site na gị iTunes Library.
Ọ bụrụ na ị nwere song killers songs, vidiyo ma ọ bụ foto nke na-adị na gị iPhone, ma ọ bụghị na gị iTunes Library ma ọ bụ Mac, ị kwesịrị ị na mbụ idetuo ha si gị iPhone gị Mac ma ọ bụ iTunes Library mbụ. Ma, mgbe syncing gị iPhone na gị Mac, ị ga-atụfu ha ruo mgbe ebighị ebi. Iji nyefee media faịlụ site na gị iPhone gị Mac, na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
Nzọụkwụ 1. Download Wondershare TunesGo (Mac)
Download na wụnye Wondershare TunesGo (Mac) na kọmputa gị. Na mgbe ahụ jikọọ gị iPhone na gị Mac site eriri USB. Mgbe gị iPhone achọpụtara site Wondershare TunesGo (Mac), ọ ga-apụta na isi window.
Nzọụkwụ 2. Nyefee Media faịlụ site iPhone ka Mac
Site window nke TunesGo (Mac), ị nwere ike mfe idetuo music na listi ọkpụkpọ site na iPhone gị iTunes Library ozugbo. Na i nwekwara ike nyefee selectes songs, vidio, na foto site na iPhone gị Mac maka nkwado ndabere na mpaghara kwa.
-Ekwu, i nwere ike mmekọrịta iPhone na Mac site eriri USB ma ọ bụ site Wi-Fi. Buru onye gị mkpa.
Mmekọrịta iPhone na Mac site eriri USB
Nzọụkwụ 1. Launch iTunes na jikọọ na gị iPhone na gị Mac. Pịa iTunes View menu ma họrọ Gosi sidebar.
Nzọụkwụ 2. Pịa gị iPhone n'okpuru NGWAỌRỤ na ekpe sidebar. Na mgbe ahụ n'akụkụ aka nri, ị pụrụ ịhụ égwu, Music, Movies, TV egosi, Akwụkwọ, foto, na ọzọ taabụ. Pịa ọ bụla taabụ karị. Na mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ mmekọrịta nhọrọ. Lelee ya ka mmekọrịta faịlụ site na gị iTunes Library gị iPhone.
Mmekọrịta iPhone na Mac site Wi-Fi
Ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị ka mmekọrịta iPhone na Mac site eriri USB oge ọ bụla, ị pụrụ ime ya site n'itinye Wi-Fi syncing. Ma tupu eji ya, ị kwesịrị ị melite iTunes mbụ.
Nzọụkwụ 1. y'otú iTunes on Mac. N'ihi na oge mbụ, i kwesịrị jikọọ gị iPhone na gị Mac site na eriri USB. Pịa View> Gosi sidebar.
Nzọụkwụ 2. Pịa gị iPhone na ekpe sidebar. Na mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ Summary window na n'akụkụ aka nri. Na Nhọrọ ebe, ego Sycn na nke a iPhone n'elu Wi-Fi.
Mgbe mwube nke a, mgbe ọ bụla gị na kọmputa gị iPhone bụ na otu netwọk, gị iPhone ga-egosi na iTunes-akpaghị aka. Na syncing amalite n'etiti gị iPhone na Mac-akpaghị aka.
Export Video si iPhone ka Mac
Nyefee Songs si iPhone ka Mac
Mmekọrịta iPhone Ndi ana-akpo ka Mac
Bugharịa iPhone Photos ka Mac
Nyefee Music si iTunes ka iPhone
Jailbreak iPhone 4S site na iji Evasi0n 7
Wondershare IPhone Nyefee maka Ị
Copy ọdịnaya site Android ka iPhone
Bugharịa Stuff si iPhone ka Android
Nyefee na Ndi ana-akpo si iPhone ka iPhone
Laghachi Castle Wolfenstein maka Mac
A Quick Way naghachi ehichapụ ma ọ bụ formatted Okwu File na Mac
Get Back Data si Draịvụ na Mac Disk Iweghachite Software
> Resource> Mac> Olee ka mmekọrịta iPhone ka Mac-enweghị adịkwa Ihe ọ bụla